I-Semalt icebisa ama-5 e-Best Web Scraping Tools
I-Web scraping yinkqubo eyinkimbinkimbi eqinisekisa ukukhutshwa kwedatha esemgangathweni kwi-Intanethi kwaye idonsa ulwazi oluncedo kubasebenzisi. Kungenakwenzeka ukuba ufumane i-software efanelekileyo isofthiwe okanye isixhobo njengokuba kukho ezininzi zokukhetha ngaphandle. Nangona kunjalo, ezinye iiprogram zifuna izakhono zobuchwephesha kwezobugcisa ngelixa ezinye zibiza kakhulu, kwaye azifanelekanga ukuqala.
Lapha siye sathetha malunga ne-5 engcono ye-software yokurhola i-software yokusetyenziswa kwezorhwebo nokungekho yorhwebo.
I-Ficstar yinkonzo enamandla ene-intanethi ayifuni ukuba udibanise kwaye ubuyekeze idatha eyimifanekiso ngesandla. Endaweni yoko, ichonga, ihlalutye, iphinde iququzelele idatha kuwe: iyakubonisana kwaye ifanise iimveliso kunye neenkonzo ngeenkonzo ezahlukeneyo zewebhu. Ukusebenzisa i-Ficstar, akudingeki uhlolisise iirekhodi okanye udibanise amaphepha eedatha njengoko uza kwenza yonke into ngokwemiyalelo yakho kunye neemfuno zakho. Ukusuka kwi-e-yorhwebo kunye ne-website yeevenkile ukuya kwiikhomputha ze-intanethi, le software ingakwazi ukukhupha zonke iintlobo zedatha, isenze sijonge iziphumo ezipheleleyo ngaphandle kokutyalomali.
iWeb iyona sixhobo esihle kakhulu kwaye sinokuthenjwa kubasebenzisi bezoshishino nabangabasebenzi..Ivumela ukuba sikhankanywe kwiwebhusayithi okanye kwiblogi, ukuvavanya isicatshulwa sokucoca, ukukhangela nokuvavanya umgangatho, kwaye sihlawule umrhumo xa umsebenzi wethu usenziwa ngokwemiqweno yethu kunye nokulindela. Ukuba uqala, akudingeki ukhathazeke ngamanani ayo njengoko iWeb ayiyi kuhlawula imali engaphezulu kwama-40 ngonyaka ngenyanga. Ngenye yezona zinto zingcono kakhulu zokumbiwa kwemigodi kunye nokukhutshwa komxholo kwikhompyutha.
IWebebMiner ngokwenene yinkampani ye-web scraping eyenze isofthiwe yegama elinye. Le nkqubo enamandla yenza inamba enkulu yedata kwiiyure nganye, kwaye inikezela ngokuzenzekelayo kunye nenkonzo yokubonisana kubasebenzisi bayo. Kungakhathaliseki ukuba uluhlobo luni lwedatha olufunayo, iTheWebMiner iya kuzaliseka ngokuqinisekileyo. Ukusuka kwidatha yenkcukacha yesikhathi esisodwa kubonakala kwiingxelo zemihla ngemihla okanye izibuyekezo malunga neentengiso kumarhwebo, le software izakukunika zonke iinkcukacha zolwazi. Ezinye zeendlela ezikhethileyo zibonakaliso zoluhlu, isicatshulwa sedatha esinkcukacha, kunye nokuchongwa kwendlela.
NjengaweTheWebMiner, i-WebSundew yinkqubo enamandla kwaye inokumangalisa ye-web scraping yezobini zorhwebo nezengeniso zorhwebo. Inceda ukukhipha idatha kwiziko lewebhu ngokukhawuleza kunye nemveliso. I-WebSundew ivumela ukuba sizenzele inkqubo yokukhutshwa kwedatha kwaye silondoloze ulwazi oluku-inthanethi nakwi-intanethi. Abathengi beprogram bayazi ukuba iWebSundew inokuqokelela, ihlalutye iphinde iqale uluhlu olubanzi lwewebhusayithi ngaphandle kwamanqanaba okubhala.
5. UDarcy Ripper: